Singapore Ma Ku Biiri Doontaa Isbahaysiga 'Dagaalkii Qaboobaa – Qaab-dhismeedka' Biden ee ka dhanka ah Shiinaha, ayaa yiri RW ⋆ News: Art, Travel, Design, Technology
Khamiista, Diseembar 3, 2020
Bogga ugu weyn World News
Singapore Ma Ku Biiri Doontaa Isbahaysiga Biden ee 'Dagaalkii Qaboobaa – Model' ee Ka Dhanka Ahaa Shiinaha, Ayuu Yiri RW
Sidee ciidamada gaarka ah ee Shiinaha ay isugu soo ururinayaan howlwadeenada gaarka ah ee Mareykanka
Xukunka kufsiga galmada ee Bill Cosby wuxuu aadayaa maxkamada ugu sareysa Pennsylvania
U.Okay noqday wadankii ugu horeeyey ee ansixiya talaalka Pfizer-BioNTech Covid-19
Sawir ayaa muujinaya askari cabaya lugta jilicsan ee dagaalyahanada Taliban
2020 ayaa noqon doonta mid ka mid ah seddexda sano ee ugu kulul rikoorka inkastoo saameynta qaboojinta ee La Niña, ayaa lagu yiri warbixinta
Dabka kaynta ayaa qarxaya jasiiradda ciidda ugu weyn adduunka iyadoo mawjad kulaylku qabanayo Australia
Aqalka Cad ayaa tuuraya darsin xaflado gudaha ah inta lagu guda jiro aafada.
Beeraleyda Hindiya ayaa mudaaharaadaya: Kumanaan qof ayaa ku qulqulaya Delhi iyagoo ka soo horjeeda xeerarka xakamaynta
Rudy Giuliani wuxuu yiri Musuqmaasuqa 'Dhamaantiis kuma ahan dhanka Dimuqraadiga' sida Gudoomiyaha Arizona uu difaaco natiijada doorashada
On Twitter Iyo TikTok, Carruurta Biden Waxay Bixin Kartaa Muuqaalka Muuqaalka Nolosha Aqalka Cad: NPR
Singapore ma noqoneyso xubin ka tirsan Madaxweynaha la doortay Joe BidenIsbahaysiga “Dagaalkii Qaboobaa – Qaabkii” ee ka soo horjeedey Shiinaha, Raiisel wasaare Lee Hsien Loong ayaa qirey gole wada hadal Isniintii.
Lee, oo si joogto ah uga shaqeeya isku dheelitirnaanta qarankiisa Koonfur-bari Aasiya, ayaa ku gacan saydhay soo-jeedintii ololaha suuq-geynta ee guddoomiye-ku-xigeenkii hore isagoo u hoggaansamaya waxa uu ku faray inay macquul tahay in la sii wado ganacsiga Shiinaha.
"Waxaan u maleynayaa in dalal badan aysan jeclaan doonin inay ku biiraan isbahaysi ka dhan ah kuwa laga saaray, oo uu madax u noqon doono Shiinaha," ayuu ra'iisul wasaaraha u sheegay Bloomberg New Economy Forum.
“Waxaa jiri doona dalal raba inay ganacsi la sameeyaan Shiinaha,” ayuu qeexay, oo ay ka mid yihiin: “Si aan isugu dayo oo aan u sameeyo shax, Qaab Dagaalkii Qaboobaa, uma maleynayo inay taasi ku jirto kaararka.”
Lee wuxuu ka mid yahay madax aad u tiro yar oo laga codsaday fikirkiisa ku aadan isbadalka soo socda ee maamulka Mareykanka gudihiisa. Si kastaba ha noqotee, ra'iisul wasaaraha markii shanaad uma badna inuu wax ka bedeli doono mowqifka gobolka ee caqliga leh iyo muddada dheer ee ah inuusan dhinac la safnayn halganka US-Shiinaha
In wareysi 2013 lala yeesho The Washington Post, Lee wuxuu ku sifeeyay warka ka soo yeeray mas'uuliyiintiisa jihada labada dhaqaale ee aduunka ugu weyn "cuno keega aan cunno cun oo saaxiib la noqo qof walba."
Raiisel wasaare Lee wuxuu sharraxay waxyaalaha wanaagsan ee ka dhalan kara maamulka Biden maxaa yeelay suuragalnimada dib u howlgelinta Washington iyo Beijing, marka lagu daro dib u soo celinta falalka Mareykanka ee adduunka oo dhan jirkeena, si kastaba ha ahaatee wuxuu joojiyay baahida loo qabo saadaalinta isu soo dhawaansho buuxda.
"Marnaba dib ugama soo noqoneyso jidka oo dhan," ayuu Lee ka sheegay xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha, kaas oo sida caadiga ah mar kale ku dhuftay hadaladiisa adag ee shakhsiyadeed ee ku aaddan dhibcaha la barbardhigi karo Huawei iyo iibinta hubka balaaran ee bilyan ee Taiwan.
Wuxuu ku tilmaamay 4-tii sano ee Trump uu ku sugnaa goobta shaqada “buuq” wuxuuna cadeeyay hal ku dhigyada lama ilaawaanka ah ee madaxweynaha ee “America First” iyo “Make America Great Again” inay ahaayeen “qeexitaan cidhiidhi ah” oo ku saabsan raadinta taariikhiga ah ee Mareykanka ee dibada, gaar ahaan xasilloonida Aasiya.
Trump oo Khasaaray Mareykanka Dib-u-dhiska 'Xannibaadda Ku-Meel-Gaarka caadiga ah': Bill Clinton
Akhri dheeri ah
"Waxaan u maleynayaa inay jiraan xubno ka mid ah maamulka oo runtii doonayey inay sameeyaan dhaq dhaqaaqyo taas oo ay adkaan laheyd in laga noqdo maamulkii ku xigey, taas oo dejin doonta qaabka xiriirka muddada dheer ee soo socota," raiisul wasaaraha saddexaad ee Singapore. ayaa sheegay.
“Mar alla markii aad soo rogto canshuuraha ciqaabta, mar aad saarto, wax kastoo ay mudan yihiin, ma jirto dowlad beddeli karta oo dhihi karta waxay ahaayeen waxyaabo qaldan oo aan sameeyo waana ka qaadayaa,” ayuu sii raaciyay.
"Waa inaad wax ka qabataa, laakiin waxaad wax ka qabanaysaa meel cusub oo laga bilaabayo," ayuu raaciyay, isaga oo si cad u tixraacaya amarkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Trump ee mamnuucaya lahaanshaha saamiga Mareykanka iyo maalgelinta 31 shirkadood oo Shiineys ah oo xiriir la leh Ciidanka Xoreynta Dadka.
In kasta oo ay jirtay heshiis laba geesood ah "oo aan shaki lahayn" ee ku saabsan Shiinaha oo ku saabsan halista istiraatiijiyadeed, haddana 2-da quwadood uma badnayn inay dib ugu soo laabtaan dharbaaxo, Lee ayaa sidaas yidhi.
"Uma maleynayo shiinuhu inay rabaan shil, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay ogyihiin inaysan diyaar u aheyn shil," ayuu ku dooday, halka uu weliba ugu yeeray "gorgortan adag."
Sawir fayl ah: Raiisel Wasaaraha Singapore Lee Hsien Loong.
Gole dood wadaag ah oo ku saabsan Iskaashiga Dhaqaalaha Aasiya iyo Baasifigga Khamiista, Lee wuxuu sheegay inuu rajeynayo in maamulka Biden uu yeelan doono "hab isku xirnaan badan, nidaamsan" oo ku aaddan daboolidda arrimaha dibedda iyo iskaashiga adduunka oo dhan marka la barbardhigo kan hadda xilka haya ee Aqalka Cad.
At APEC CEO Dialogues 2020, oo ay martigelisay Malaysia, ra'iisul wasaaraha Singapore wuxuu eedeyn dusha ka saaray aragtida isboortiga ee Trump ee ganacsiga si loo adkeeyo horumarka guddiga dooda muddooyinkii u dambeeyay.
"Aragtida maamulka Trump ayaa ah in tani ay tahay soo jeedin guul-darro ah," ayuu qeexay. “Haddii aan kula joogo wax dheeri ah oo ganacsi, taasi waa aniga aniga aniga. Haddii aan kaa maqnaado xagga ganacsiga, taasi waa igu xun tahay. ”
"Ganacsiga sidaas maahan," Lee ayaa yiri. “Ganacsiga waa guul-guul. Waxaa laga yaabaa inaan kula joogo wax dheeri ah; Waxaan leeyahay cillad aniga iyo qof kale. Laakiin macno malahan ilaa inta guud ahaan ay isku miisaameyso. ”
"Daryeelka danaha Mareykanka micnaheedu maahan inaad dul istaagto danaha wadamada kale," ayuu raaciyay. “Laakiin taasi waxay ahayd aragtida maamulkan, maamulkanina wuxuu kusii socon doonaa kharash ilaa 20-ka Janaayo.
Lee wuxuu intaa sii raaciyey gabagabadii Axadii ee Iskaashatada Dhameystiran ee Dhaqaalaha ee Gobolka - heshiis ganacsi oo bilaash ah sideed sano gudahood sameynta.
Xubnaha RCEP ee 15 xubnood waxay qaabilaan kooxaha waaweyn sida Shiinaha, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Australia, kuwaas oo xilligan dhammaantood qayb ka ah iibsiga iyo iibinta midowga adduunka ugu weyn.
article PreviousBishan 'Top News' Ethereum News, Innovation & Development - May 2020
Next articleIskuulka Waxbarshada ee Millikin wuxuu kudhawaaqayaa Fursada Ansixinta Waxbarashada Gaarka ah ee macalimiinta hada
Sannadkii 1972, heesaa Talyaani ah ayaa qoray hees caan ah oo Ingiriisiga ka dhawaajisay ...
Isla Fisher waxay heleysaa mid u gaar ah oo la sixray
Kormeeraha: Dib-u-eegista Nidaamka Yaraynta - Xujada Xujada ah ee ugu Fiican
Sannadkii 1972, heesaa Talyaani ah ayaa hees qiiro leh ku qoray gibberish-ka dhawaajinta Ingiriisiga waana wax lagu farxo
Newsom bemoans attending dinner get together; state discourages travel
Welcome to the weekend! I'm Winston Gieseke, philanthropy and particular sections editor for The Desert Sun in Palm Springs, the place the solar is at...